Ankadikely Ilafy : tratra ireo tambajotrana mpangalatra sy mpividy moto halatra | NewsMada
Ankadikely Ilafy : tratra ireo tambajotrana mpangalatra sy mpividy moto halatra
Noraisim-potsiny! Ravan’ny polisy misahana ny heloka bevava (BC), sakelika fahefatra ireo tambajotrana mpangalatra sy mpividy moto halatra eto an-drenivohitra. Olona miisa sivy indray tratra teny Ankadikely Ilafy, ny alarobia sy alakamisy lasa teo…
Tambajotra mpividy sy mpivarotra moto halatra ireto voasambotry ny polisin’ny BC ireto. Nahazo loharanom-baovao ny polisy fa misy olona mivarotra moto halatra eny Ankadikely Ilafy eny. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy, ny alarobia 9 mey 2018 tamin’ny 10 ora maraina ka tratra tao an-tranony ny lehilahy iray antsoina hoe Rado, 31 taona. Mbola nahatrarana moto halatra maromaro tao an-tranony nandritra ny fisavana nataon’ny polisy. Nilaza izy nandritra ny fanadihadian’ny polisy fa mividy moto halatra ary mivarotra indray avy eo. Nambarany fa lehilahy miisa efatra no mpanatitra moto halatra ao an-tranony eny Ankadikely Ilafy, isaky ny amin’ny 3 ora maraina. Miverina indray ry zalahy rehefa amin’ny 6 ora hariva maka ny vidin’izany moto halatra izany, araka ny tatitra nampitain’ny polisy hatrany.
Ahazoana tombony 5 hetsy Ar isaky ny moto…
Nilaza koa izy fa fantenany ireo moto halatra ireo ka izay mety aminy, hanamboarany taratasy hosoka fa ny ambiny kosa amidiny amin’ireo namany mpandray moto halatra ihany.
Vehivavy iray sy lehilahy miisa fito ny voasambotry ny polisy ny alarobia sy ny alakamisy 10 mey 2018 rehefa notondroin’i Rado fa mpividy ireo moto halatra ireo. Mbola hita teny amin’izy ireo daholo ireo moto halatra ireo ary efa misy taratasy hosoka avokoa. Nilaza i Rado nandritra ny famotorana nataon’ny polisy fa vidiany 2 hetsy Ar ka hatramin’ny 5 hetsy Ar ireo moto halatra ireo ka hakany tombony 5 hetsy Ar ny moto iray. Tamin’ny fanadihadiana ihany koa, fantatra fa misy moto efa ataon’izy ireo fakana piesy fotsiny na antsoina koa hoe “atao kotoleta” ary misy koa ovain’izy ireo ny motera sy ny vatany ivelany ka sarotsarotra ny hamantatra izany moto izany. Moto halatra miisa sivy no hitan’ny polisy tamin’ireo tambajotrana mpangatra moto ireo. Niaiky ny heloka vitany daholo ireto olon-dratsy ireto. Aoka ho mailo fa mirongatra ny halatra moto.